Saxaafadda dhijitaalka ah - VANTAGE | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Wararka war baahinta waxaa ka socda isbadal deg deg ah. Qaabab cusub oo joornaaliisnimo ayaa ka soo ifbaxaya habab badan iyo warshado. VANTAGE Digital Journalism waxay ku martiqaadeysaa ardayda inay sahamiyaan hal-abuurnimo, habab hal abuur leh oo lagu soo saaro sheekooyinka iyadoo la adeegsanayo fiidiyoowga iyo codka. La shaqeynta xirfadleyda warbaahinta dijitaalka ah, ardaydu waxay bartaan heerarka warshadaha ee warbaahinta dijitaalka ah iyo sidoo kale xayeysiinta baahinta iyo warbaahinta bulshada. Waxay sahamiyaan adduunka bixinta gudbinta sawirada, ganacsiga, wareysiyada iyo ogeysiiska adeegga dadweynaha, iyo sidoo kale munaasabadaha ganacsiga iyo bulshada ee maxalliga ah. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Soosaarida fiidiyaha (hal dhibic gudaheeda Art)
Saxaafadda dhijitaalka ah iyo Baadhitaan Baadhitaan (hal dhibic oo Ingiriis ah)